မရှိမကောင်း ရှိမကောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မရှိမကောင်း ရှိမကောင်း
Posted by weiwei on May 24, 2012 in Creative Writing, Short Story | 46 comments
wei's story ဖုန်းယဉ်ကျေးမှု
နှစ်တန်းကျောင်းသူ သမီးလေးကို အိမ်မှာဆရာမခေါ်ပြီး စာသင်ပါတယ်။ ဆရာမနဲ့ စာသင်နေချိန်တွေဟာ ကျွန်မအတွက် အိမ်အလုပ်တွေကောင်းကောင်းလုပ်ရချိန်ပါပဲ။ အလွန်အဆော့မက်ပြီး စကားများလွန်းတဲ့သမီးကို စာသင်ချိန်လေးခဏကသာ ငြိမ်သက်စေနိုင်ပါတော့တယ်။
တစ်ဖက်ခန်းမှာ သမီးလေးစာသင်နေတုန်း မီးခိုချောင်ထဲဟင်းချက်နေချိန်မှာ သမီးက မီးဖိုထဲရောက်လာတယ်။
အမေ။ ။ ဟယ် .. သမီး … စာမသင်ဘူးလား။ ဆရာမ ဘာလုပ်နေလဲ?
သမီး။ ။ ဆရာမ ဖုန်းပြောနေလို့ပါ မေမေ ….
တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ ဆရာမလေးမှာ ဖုန်းအသစ်လေးတစ်လုံးဝယ်ထားပါတယ်။ ဆရာမဆီမှာ ဖုန်းနဲ့ဆိုတော့ စာသင်ချိန်တွေကို အချိန်ပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အချိန်ဖျက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်မရွေးဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားနိုင်တာမို့လို့ ကောင်းလိုက်တာလို့ ကျွန်မတွေးမိခဲ့တာလဲ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် …
စာသင်ချိန်က စုစုပေါင်းနှစ်နာရီမှာ စသင်လို့မှ ၁၀ မိနစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ ဖုန်းလာပါပြီ ..
ဆရာမ။ ။ ဟယ်လို အမေလား …
တစ်ဖက်လူ။ ။ ………………
ဆရာမ။ ။ သမီးဘီဒိုထဲမှာ သေချာထည့်ထားခဲ့တယ်လေ … သေချာရှာပါအုန်းအမေ …
ဖုန်းချလိုက်ပြီး စာဆက်သင်လို့မှ ၁၀ မိနစ်မရှိသေးဘူး .. ဖုန်းထပ်လာပြန်ပါပြီ ..
ဆရာမ။ ။ ဟယ်လို အမေ … တွေ့ပြီလား …
တစ်ဖက်လူ။ ။ …………..
ဆရာမ။ ။ သမီးပြောသားပဲ … သေချာမရှာကြည့်ပဲနဲ့ အခုတွေ့ပြီမဟုတ်လား … ပြန်လာရင် ဈေးထဲက ဘာဝယ်ခဲ့ရမလဲ …
တစ်ဖက်လူ။ ။ …………
ဆရာမ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ အမေ … ဒါပဲနော် ….
ဆရာမစာဆက်သင်နေပါတယ် … မကြာပါဘူး .. ဖုန်းထပ်လာပြန်ပါတယ် …
ဆရာမ။ ။ ဟယ်လို ..
တစ်ဖက်လူ ။ ။ …………..
ဆရာမ။ ။ ဟယ် သူငယ်ချင်း … ငါ့ဖုန်းနံပါတ်ဘယ်လိုရသွားတာလဲ .. နင်ဘယ်မှာလဲ .. ဘာလုပ်နေတာလဲ .. မတွေ့တာတောင်ကြာပြီနော် …
တစ်ဖက်လူ။ ။ ………………….
ဆရာမ ။ ။ …………
ဖုန်းပြောနေလိုက်တာ ဘေးမှာကလေးစာသင်နေတာကိုမေ့လို့ ကလေးက မီးဖိုထဲရောက်နေတာတောင်မှ မသိနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေအထိပါပဲ …
ကျွန်မဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့ စဉ်းစားတယ်။ အခုမှ ဖုန်းအသစ်ကိုင်ခါစ ဆရာမငယ်ငယ်လေးကို စာသင်ချိန်မှာ ဖုန်းပိတ်ထားပါလို့ ကျွန်မပြောမထွက်ပါဘူး။ သူ့မှာလဲ အခုမှ မျောက်အုန်းသီးရဆိုသလိုဖြစ်နေရှာပါသေးတယ်မဟုတ်လား။
ဖုန်းတွေပေါများလာပြီး လူတိုင်းနီးပါးကိုင်နိုင်ကြချိန်မှာ ဖုန်းယဉ်ကျေးမှု ပညာပေးတွေ မီဒီယာတွေကနေတဆင့် လုပ်ကြရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ စဉ်းစားမိရင်း …
သြော် .. ဖုန်းဆိုတာ … မရှိမကောင်း ရှိမကောင်း ပါလားလို့ …..
ကိုပေါက်ပို့ပေးတဲ့ ဖုန်းကျော် ..
အန်တီ ပဒုမ္မာပို့ပေးတဲ့ ပို့စ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ဓါတ်ပုံ
ဒါလေးကောင်းလို့ ရှဲလိုက်တယ်ဗျို့ ….
အဲဒီအချက် ၁၅ ချက်ကို ပရင့်ထုတ်ပြီး ပြည်သူပိုင်နေရာတွေမှာ ကပ်ထားဖို့သင့်တယ်နော် … တီဗီကနေလဲ ကြော်ငြာထိုးသလိုမျိုး ပြပေးရင် ကောင်းမယ် …
မရှိလည်း မကောင်းရှိလည်း မကောင်း လို့ ပြောတာ သဘောကျပါတယ်။
ဖုန်း ၀ယ်ကာစ လူတွေ ဒီလိုပါပဲ
နောက် ဖုန်းတောင်းဆက်တဲ့ လူတွေ၇ှိသေးတယ်။လက်ဖက်ရည် ဆိုင်နေရင်းက
ကောင်မလေး တစ်ယောက်က ဖုန်း ခဏလောက် ဆက်ပါရစေ..တဲ့ ပြောလိုက်တာ ချစ်သူနဲ့ ၁၅မီးနစ်လောက် နောက်တစ်ယောက်က လည်း ဖုန်း ခဏလေးပြောလို့ရမလားတဲ့
အားနာလို့ပေးလိုက်မိတယ် နာရီဝက် ၊ ကြာလိုက်တာကွာ သွားစရာရှိလို့ လို့ပြောတော့
စိတ်ဆိုးသေး နောက် တစ်ယောက် ကလည်း ဖုန်းပြပါအုံးဆိုပြီး ဆက်လိုက်တာ သူဖုန်း အတိုင်းပဲ
ဒါတောင် ကျွန်တော်က မြင်သာအောင် တစ်ချို့လို ခါးချိတ်တာ မဟုတ်၊ အိတ်ထဲ ထည့်တာနော်။
မရှိမကောင်း….ရှိမကောင်းကို ထောက်ခံတာပါ ဆရာမ။
အစ်ကို ဖုန်းလေး ခဏငှားပါ ၊ ချစ်ချစ်နဲ့ ၄၅ မိနစ်လောက် ပဲပြောမှာပါ ။
အော် အန်တီဝေ့ သမီးက ဒီနှစ် ၂ တန်း တက်မှာလား ၊ ဘယ်ကျောင်းမှာလဲ :D
သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးက ရုံးကိုလာတာ မျက်မှန် နဲ့ ဦးထုပ်လေး ဆောင်းလို့ ဖုံးကြိုးလေးကို လက်ညှိုးလေးနဲ့ လှည့်ရင်း လမ်းလျှောက်သွားတယ် သူတို့ မျက်နှာမှာ ကျေနပ် ကြည်နှုးစိတ်အပြည့်နဲ့
ကာလတစ်ခုထိတော့ ဒါမျိုးတွေ တွေ့နေရမယ်
ဖုံး ဆိုတာ ဇိမ်ခံပစ္စည်း မဟုတ်ဘူး နေ့စဉ်ပုံမှန်သုံး ပစ္စည်း ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားမယ် ( အဲ ဖုံးခတွေလဲတော်တော်ကုန်သွားပါရင်တော့ ) အားလုံးပုံမှန် ဖြစ်သွားကြမှာပါ
ကျုပ်လဲ အမြင်ကတ် ခံချင်လို့တစ်လုံးလောက် ၀ယ်ပေးကြဘာဦး..
ကျုပ်သာ ဖုတ်ရှိလို့ ကဒေါ့ ရွာထဲက လူတွေ အာကုန်လုံးလိုက်ဆက်ပစ်မယ်..
ဟဲ့လူ .. ဟတ်လူ ..
ဟတ်လို … ဗိုက်ခေးရား ..
( လူကြီးမင်း ခေါ်ဆိုသော တဲ့လီဖုန်းမှာ
ဆက်သွယ်ရေး ရုံးမှာ ချိပါဒေးဒယ်ချင် .. :D )
ဝေ့ သမီး ဆရာမက ဖုန်းကြောင့်…
အိမ်က သမီး ဆရာမကတော့…
ကလေးကို ဆက်တွက်ဆိုပြီး ဘုရားစာရွတ်လိုက် ပုတီးစိတ်လိုက်နဲ့
စာသင်ချိန် နှစ်နာရီမှာ စာသင်ရတာ နာရီဝက်မရှိဘူး…
ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်အောင် အမေနေရာကနေ ခံစားပြီး ရေးထားတာပါ ..
တကယ်တော့ တူမသာဖြစ်ပါကြောင်း ….
ဆရာမ ဆိုတာနဲ့ ရေးမိသွားတာ…
ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး မျက်စိလည်သွားတယ်နော်..
ကွန်မင့်ထဲကျမှ တူမလို့ ၀န်ခံထားတယ်
ခံစား ရေးဖွဲ့ ကောင်းလို့ အပျိုကြီး ဒေါ်ဝေေ၀ ကလေးအမေ ထင်ကုန်ပြီ။ ဟိဟိ..
အပျိုကြီးနော်.. အပျိုကြီး.. သံယောဇဉ်နည်းချင်လို့ အပျိုကြီး လုပ်နေတာ.. ဟွန့်..
တူမတွေ တူတွေတော့ ချစ်တတ်တယ် ဒါပဲ.. အဟိ..
မဝေ အစား ပြောကြည့်တာ.. ဆူး ကတော့ တူတွေ တူမတွေ နဲ့ အလှမ်းဝေးလို့ သံယောဇဉ်နည်းတယ်။
အပျိုဂျီး အချင်းချင်း သတင်းလွေ့လွေ့ ဖြစ်နပါကလား …
ဂယ်တော့ အပျိုဂျီးဆိုတာ …
ဘာပါလိမ့် ..ဘဖော ရေ ….????
အပျိုကြီးတွေ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့.. ပြောတဲ့ လူတွေက မနာလို လို့ ပြောတာ.. ဖြစ်လိမ့်မယ်။ :D
အိမ်ထောင်ပြုပြီးမှ အပျိုကြီး ပြန်လုပ်ချင်လို့ မရဘူး။ ;)
အပျိုကို.. ရှိသမျှယောက်ျားတွေ.. ပိုင်ခွင့်ရှိနေတယ်မဟုတ်လား..
အပျိုက.. ပြန်ကြိုက်ချင်ကြိုက်နိုင်တဲ့..% လေးတော့ရှိနိုင်..မျှော်လင့်နိုင်တာကိုး..
“ရှိသမျှယောက်ျားတွေ.” ဆိုတာကိုတော့ တစ်ပါတ်လောက် လျှော့လိုက်ပါဦးလေ။
ကိုယ့်ဟာကိုယ် လဲ အဲဒီ အထဲ စာရင်း တို့ထားလား?
ခိုင် ရေ ဒီမှာ နောက်တစ်မျိုး တော့ …… :D
ကောင်းပြီလေ.. လေဒီခိုင်ကိုသနားလို့.. အနော်နှုတ်ထွက်လိုက်မယ်..။ ဟီး..။
ဒီခေတ်က.. ဂေးတွေအတူတူနေနိုင်တဲ့ခေတ်ဖြစ်လာပြီမို့.. မိန်းမတွေပါတိုးပလိုက်မယ်..
Newsweek puts rejected Obama ‘first gay president’ covers online …
May 15, 2012 – Newsweek attempted to stir up some controversy this week with its cover, declaring Barack Obama America’s “first gay president” and giving ..
သူကြီးကို မုန်းလိုက်တာ တဆိတ်ရှိအပျိုကြီးတွေပဲ လာခလုတ်တိုက်နေတာ
အိမ်ထောင်ပြုရင် အစိမ်းတသိန်း ထုတ်ပေးမှာလားပြော
no , i’m just inarelationship with freedom. ;)
ရွာထဲက.. ရွာသူအပျိုတွေ လိုချင်ရင်.. တင်တောင်းမှရမယ့်ထုံးစံ.. လုပ်လိုက်မယ်လေ…
ပြောရရင်… ကျုပ်က.. **$%#%^&%$#…
ငရဲပြည်နဲ့..နတ်ပြည်ကြား.. ပွဲခယူ.. ပွဲညွှန့်စား.. ပွဲစားများကို.. မယုံကြည်ပါကြောင်း..
ပွဲစား မယုံကြည်ပဲ ပွဲစား လုပ်မနေပါနဲ့.. ကိုယ့်စကားနဲ့ကိုယ် အချိန်တန်မှ လာထား..
နှာစေးမနေနဲ့.. ကြိုပြီး ဆေးသောက်ထား ဒါပဲ…
အခုတော့ ၁၀ ယူသွားတယ်။ ဒါပဲ..
မန်းထားတာကို ဖြတ်တောက်ပြီး လိုရာဆွဲမတင်ပါနဲ့လို့..
ကျုပ်က.. ပွဲစား.. လက်လဲခံတယ်..။ လိုအပ်တယ်လို့လည်းယူဆတယ်..။
အဲ.. ကိုယ်တိုင်လည်း.. အခွင့်ပေးရင်လုပ်တယ်…။
ကျုပ်မယုံကြည်တဲ့ ပွဲစားက… ဟိုဖက်ပို့စ်မှာ မန်းထားတဲ့အတိုင်း.. အောက်မှာပြန်တင်ပေးထားတယ်…
ဘိုးတော်..ဘွားတော်..နတ်ကတော်နဲ့.. တချို့သောဘုန်းကြီးများကို ပြောနေတာ… :?
ပာရရင်… ကျုပ်က.. ငရဲရော..နတ်ပြည်ရော ရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ်..
နေ(ကြယ်)နဲ့နီးတဲ့.. ဂြိုလ်ပေါ်က.. သတ္တ၀ါတွေကို.. လူနေရာကကြည့်ရင်.. ငရဲသားတွေဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာပေါ့…
ဒီအတိုင်းပဲ.. အာဗာတာထဲကလို..ပင်ဒိုရာ ဂြိုလ်မှာနေတဲ့နာဗီးတွေက.. လူနေရာကြည့်မယ်ဆိုရင်.. နတ်တွေလည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်..
စင်္ကြာဝဌာအနန္တမှာ.. လူတွေနဲ့..လူဆင်တူသူတေါ.. မရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်.။ သူတို့ကို.. လူ..နတ်..အသူရာ..ငရဲသား..တိရိစ္ဆာန် ကြိုက်တဲ့နာမယ်တတ်နိုင်ပါတယ်..။
ကျုပ်မယုံတာက.. ဒီကမ္ဘာမြေက.. ပွဲစားတွေကို..
… အိုင်းစတိုင်းသီအိုရီ.. ပါမောက္ခဟောကင်းတွင်းနက်အကြောင်း..ကွမ်တမ်သီအိုရီ.. တလုံးတပါဒမှမသိ.. ရမ်းအုပ်မှန်းအုပ်နေတဲ့.. ပွဲစားတွေနဲ့..သူတို့ရဲ့စကားတွေကို.. မယုံကြည်ပါ..
ယုံကြည်မှုအလွဲသုံးစားလုပ်သူများမို့.. ပိုလို့.. မယုံကြည်ပါ..
သာသနာကို.. ငရဲနဲ့ခြောက်ဘုံနဲ့မြှောက်ပြီး.. စည်းရုံးနေသူများကို.. မယုံကြည်ပါ…
မရတော့ဘူး.. နှာစေး ပျောက်ဆေးသာ ဆောင်ထားပေတော့..
အဟေး… ဟေးး ဟေးး :D
တစ်ချို့ကတော့ ဒါလေးမရှိရင် လူအထင်သေးမှာစုိးလို့ကိုင်တယ်
ဘာကြောင့်ဘဲကိုင်ကိုင် ကိုယ် ကိုင်တာ သူများကို အနှောင့်မယှက်မဖြစ်ဘို့တော့လဲလိုပါတယ်.
ကျန်ာကတော့ ဒီဖုန်းက ကျနော့်အတွက် ချလူလေးလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်က လမ်းလျောက်စကလေးလေး ဘယ်နားရောက်နေတယ်ဆိုတာ သိအောင်ချူလူလေးဆွဲပေးထားပါတယ်။
အခုလဲ ကျနော်ဘယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာ သိအောင်
ဖုန်းကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတာတွေများလာပါတယ် …
အခုတလော မနက်ပိုင်းသင်တန်းတစ်ခုတက်နေရတယ် … သင်တန်းသားက ၁၀ ယောက်လောက်နဲ့ ဆရာတစ်ယောက်မှာ စာသင်ရတယ်မရှိပါဘူး … တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဖုန်းထမြည်နေပြီး အခန်းထဲကထွက်လိုက်ပြောလိုက်နဲ့ … အချင်းချင်းအားနာရကောင်းမှန်းလဲမသိ .. ဆရာ့ကိုလဲ အားမနာဘူး … ကလေးတွေလဲမဟုတ် အရာရှိအဆင့်သင်တန်းသားတွေမို့လို့ ဆရာကလဲ ဘာမှမပြောပဲလွှတ်ထားတယ် … ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်လေးတွေရှိရင် ကောင်းမှာပဲလို့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စွာနဲ့ပဲ တွေးမိပါတော့တယ် …
မဝေရေ … ကွက်တိကို ထိတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ … ။
မျောက်လက်ထဲ အုန်းသီးရဆိုသလိုပေါ့လေ … တန်ဖိုးနည်းဖုန်းတွေပေါ်လာတာကောင်းပေမယ့် …. ကိုယ့်ရဲ့ တာဝန်ချိန်တွေကို ကသိကအောက်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်း … သတိမထားမိကြဘူးပဲ … ။ ပြောရလျှင်လေ .. ရယ်စရာတော့ကောင်းပေမယ့် … စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိတယ် …သူများနိုင်ငံတွေမှာ လွယ်လွယ်နဲ့ပေါပေါဝယ်လို့ ရနေတာကို ဒီနိုင်ငံမှာ …. ဈေးကြီးကြီးမို့ ..၀ယ်သုံးနိုင်ခဲတယ် … ။ ဆက်သွယ်ရေးက … အကျင့်ပုပ်ပြီး တွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ … ဈေးကြီးတဲ့ ဖုန်းတွေ ခေတ်စားချိန်တုန်းက … ဖုန်းခါးချိတ်ရဲတဲ့ လူမရှိသေးဘူး … ။ လူလည်ခေါင်မှာ ဖုန်းထုတ်ပြောလျှင် တအံ့တသြတွေဖြစ်လို့.. ငေးသူကငေး ။ အဲ့တုန်းက .. ဖုန်းပေါက်ဈေး .. ဘာညာပေါင်းပြီး .. ဈေးကွက်ထဲအလိုက်ပေးဝယ်ရတာ .. သိန်းလေးဆယ်နီးပါးလောက် ..။ ဌာနဆိုင်ရာကအကြီးကဲတွေ ၊ လူချမ်းသာတွေ နဲ့ သူတို့သားသမီးတွေ ၊ သဘောင်္သီးတွေ၊ အနုပညာရှင်တွေလောက်ပဲ အသုံးများခဲ့ကြတယ် … ။ အဲ့ဒီခေတ်က အပိုင်မ၀ယ်ပဲ ဖုန်းငှားကိုင်တာတွေ ခေတ်စားခဲ့တယ် … ။ငှားခကတော့ ခြောက်လ ၊ တစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်ရတယ် … ။ ပဲတွေတော့များနေတာပေါ့နော် … ငှားကိုင်လား ၀ယ်ကိုင်လားဆိုတာတော့ … ဘယ်သူမှ မသိခဲ့ဘူးကိုး ။
တဖြည်ဖြည်း ဂျီအက်စ်အမ်တွေ ထွက်လာတော့.. ဆယ့်ငါးသိန်းကို နှစ်ဆယ် အစိတ်လောက်ထိ အလိုက်ပေးပြီး ၀ယ်လိုက်ကြသေးတယ် … ။ အဲ့ဒီအချိန်အရင်ကထက်တော့ လူတွေ ပိုသုံးလာနိုင်နေပြီ… အလယ်တန်းစား လူတန်းစား လက်လှမ်းမှီလာပြီ ၊ ပွဲစားလိုလူတွေလည်း ၀ယ်လာကြပြီ ၊ တစ်အိမ်လုံးမှာ တစ်လုံးတော့ ရှိဖို့ ဖြစ်ညှစ်ဝယ်လာကြပြီ … ။ အဲ့အချိန် … ကြွားချင်တဲ့ လူတွေက ထပြီး ဘက်စ်ကားပေါ်မှာ ဟလို ဟလို ဖြစ်နေကြပြီ … ။ လူတွေကတော့ ပြုံးစိစိကြည့်တုန်းပေါ့ …. ။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း … ပြုတ်ကျမှာ ပျောက်ကျမှာ စိုးတာထက် ၊ ကြွားချင်သလို ဘာလိုလိုနဲ့ ဖုန်းတွေခါးချိတ်ထားကြပြီ … ။ တစ်ချို့ကလည်း ခါးမှာချိတ်လျှင် ငြိကျမှာစိုးလို့ ရှက်လို့ ဆိုပြီး… အကျီ င်္အိတ်ထဲ ထည့်လို့ … ဖုန်းဟမ်းဆက်မှာ ချိတ်တဲ့ ကြိုးလေးကိုတော့ အပြင်ထုတ် မသိမသာကြွားကြတဲ့ခေတ်ပေါ့ … ငှားကိုင်လူတစ်ချို့လည်း ရှိနေတုန်းပါပဲ … ဒါပေမယ့် ..ငှားခကို တလချင်းရှင်းလို့ရနေပြီ ။
ငါးသိန်းဖုန်းတွေပေါ်လာပြန်ပါပြီ … သိန်းလေးဆယ်ပေးဝယ်ခဲ့ရသူတွေ ၊ ထုတ်ဈေး ဆယ့်ငါးသိန်းကို အမြတ်ပေးပြီး နှစ်ဆယ် ၊ အစိတ်ဝယ်ခဲ့ရသူတွေ … မျက်စောင်းတခဲခဲဖြစ်ပါပြီ … ငါးသိန်းဆိုတော့… သူများ အလုပ်သမားလုပ်သူတွေတောင်ကိုယ့်လစာနဲ့ကိုယ်ဝယ်လို့ ရနေပြီ … ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးတွေတောင် ကိုင်နိုင်နေပြီ ၊ အိမ်ဆိုင်လေးတွေမှာလည်း ဖုန်းတွေ ရှေ့ချပြီး … ဖုန်းခေါ်စားနေကြပြီ … ။ busကားပေါ်မှာရော ၊ ဆိုက်ကားပေါ်မှာရော ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောလာကြပြီ .. တစ်ချို့ မိန်းကလေးတွေဆို အိတ်ထဲ ထည့်ထားလဲ ကြားထဲ ဒီဖုန်းသံကို … မကြားရမှာစိုးလို့ ဆိုပြီး .. လက်က ထုတ်ကိုင် ပဲများလာကြပြီ … ။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ … သိန်းလေးဆယ်လောက်ပေါက်ပြီး မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးခဲ့သူတွေ ဟန်လုပ်ရှိုးထုတ်တုန်းက အားကျမိသမျှ … အတိုးချ လွှတ်ကြွားတော့တာပေါ့ ။
၂သိန်းတန်လည်းပေါ်လာရော … အံမယ် …လူတော်တော်ကိုင်နိုင်လာကြတယ် … ။ ကိုရီးယားကားထဲက အမှိုက်သမား အာဂျောရှိလည်းဖုန်းသုံး ၊ အိမ်အကူ … အာဂျီမားလည်း ဖုန်းသုံးတာကို မျက်စိကျနေတဲ့ … မြန်မာပြည်သူတွေ … ၀ယ်ပြီး ရှိုးထုတ်လိုက်တာ … ပေါက်ဈေးထက် သောင်းဂဏန်းထိ ပိုတောင်ပေးဝယ်နေရတုန်း … ။ ဆိုက်ကားသမားလည်း ဖုန်းဝယ် ၊ ဒရိုင်ဘာလည်း ၀ယ် ၊ ကုန်စိမ်းထမ်းတဲ့ လူလည်း ၀ယ် ၊ ပဲ ပြုတ်သယ်လည်း ၀ယ်နဲ့ ….. မြင်ရတာ .. ပြုံးစိစိတော့ဖြစ်မိတယ် …. ။ (ပြောမယ့်သာပြောတာ 2သိန်းတောင် မ၀ယ်နိုင်လို့ မကိုင်နိုင်တဲ့လူတွေလည်း ရှိပါသေးတယ် ) အခုမှ မျောက်လက်ထဲ အုံးသီးရသလို .. ring tone ကို အကျယ်ကြီးတင် … လူကြားထဲ .. ဟေ့ဟေ့ ငါပြန်လာပြီနော် … ဟဲ့ .. နင်နေကောင်းလား .. အေးအေး .. ငါဖုန်းစမ်းတာ .. စသဖြင့်တွေ စတိုင်လုပ်ပြောလိုပြောနဲ့ ..ကိုယ့်ရဲ့ သာရေး နာရေးတွေတောင် လစ်ဟင်းကုန်တာ … မသိလိုက်ကြရှာဘူး ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲ … ၂သိန်းဖုန်းထွက်ပြီး ချက်ချင်းပဲ … သီရိမင်္ဂလာဈေးက ကားဖြတ်လို့ လှမ်းကြည့်လိုက်တာ .. အံမယ် .. အညာသူမတွေ .. အသီးလာဝယ်ရင်း ကားစောင့်တုန်း တစ်ယောက်တစ်လုံးနဲ့ .. ထုတ်နှိပ်နေကြတာ… စတိုင်ကိုကျလို့ … ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်ပေမယ့် ညဘက်မို့ မရိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး … ။ ဟိုးတလောကလည်း … ဖယ်ရီမမှီမှာစိုးလို့ …ဆိုက်ကားငှားစီးမလို့ ဆိုက်ကားသမား ဖုန်းပြောနေတာမစောင့်ချင်တာနဲ့ .. မငှားဖြစ်ခဲ့ဘူး ။
ပြည်သူတွေ ဈေးပေါပေါနဲ့ ဖုန်းကိုင်နိုင်တာ ကောင်းပါတယ် … ဖြစ်လည်း ဖြစ်သင့်ပါတယ် .. သူများနိုင်ငံတွေမှာ အခြေခံလူတန်းစားကအစ .. လွယ်လွယ်နဲ့ ၀ယ်ကိုင်နိုင်တဲ့ ဖုန်းတွေကို .. ဈေးကြီးကြီးကနေ ..ဈေးပေါပေါထိ ချပေးတော့ … ပျော်ကြမှာပေါ့ … ။ ဒါပေမယ့် အခုမှ လက်ထဲရောက်စဖုန်းကို ကြွားချင်လို့ လူသိအောင် အသံအကျယ်ကြီးထားတာမျိုးတို့ … ၊ ခုနှစ်အိမ်ကြား ရှစ်အိမ်ကြား အော်ပြီး ဖုန်းပြောတာမျိုး .. လူအမြင်ကတ်စရာကောင်းလောက်အောင် … ပါ့ဘလစ်နေရာမျိုးမှာ ကိုးလို့ကန့်လန့် စကားရပ်ပြောတာမျိုး ၊ ဈေးဝယ်သူလာလျှင်တောင် ခေါ်မကြားအော်မကြားဖြစ်နေတာမျိုးနဲ့ …. ကားပေါ်မှာတောင် အလွတ်မပေး .. ကျိကျိ ကွိကွိတွေလုပ်ပြီး ဘေးကလူကို ခေါင်းကိုက်စေတာမျိုးကျတော့ ……. လူမှုရေး စိတ်ဓါတ်မရှိဘူးလို့ပြောရမလား ၊ လူလို နားမလည်ဘူးလို့ ပြောရမလားပဲ … ။
ပြောချင်နေတာကတော့ ကြာပြီ … မဝေပို့စ်နဲ့ကွက်တိကို ကျသွားတာပဲ ..ဟီးဟီး … ။ မောဘီ
“အံမယ် .. အညာသူမတွေ .. အသီးလာဝယ်ရင်း ကားစောင့်တုန်း တစ်ယောက်တစ်လုံးနဲ့ .. ထုတ်နှိပ်နေကြတာ… စတိုင်ကိုကျလို့ ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်ပေမယ့် ညဘက်မို့ မရိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး” .. ကိုင်ပါစေ လေ … သူတို့လဲ ကိုင်ချင်မှာ ပေါ့။ ဒါနဲ့ စကားမစပ် .. အညာသူမ ဟန်းဖုန်း ကိုင်တာ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ယူရလောက် အောင် ထူးဆန်း လို့လား ဗျ ..။
နောက်ကြာရင်တော့ ရိုးသွားမလား မပြောတတ်ပေမယ့် . ပထမဆုံး မြင်လိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာတော့ ထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးပဲ … အညာသူမ(ခေါင်းရွက်ဗျက်ထိုးဈေးသည်တွေ) တွေအရမ်းကပ်စေးနည်းတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်မသဒ္ဓါဘူး ။တစ်ပြားကိုတောင်နှစ်ပြားခွာချင်နေတာ ။ ကားတက်စီးပြီးကားခ တစ်ရာမပေးချင်လို့လည်းမသိချင်ယောင်ဆောင် ခိုးစီးတယ်။ အိမ်ခန်းတစ်ခန်းကိုအယောက်နှစ်ဆယ်လောက်ကျောခင်းရုံ စုငှားတယ် ။ နောက်ဆုံးအ၀တ်လျှော်လျှင်တောင် ဆပ်ပြာကုန်မှာစိုးလို့နှစ်ရက်ဆီဝတ်တယ် ။
နောက်ပြီးအဲ့ဒီလူအုပ်ကလည်း ကျွန်မတို့တအိမ်ကျော်မှာ လာငှားနေခဲ့ဖူးလို့ ကပ်စေးနည်းမှန်းသိတာ ။ အဲ့လိုကပ်စေးနည်းသူတွေက …. နှစ်သိန်းတန်ဝယ်ကိုင်တာတော့ … ကျွန်မအတွက်အထူးဆန်းပဲ ။ ဓါတ်ပုံရိုက်လောက်အောင်စိတ်ဝင်စားမိတာက … အရင်ကဆိုကားတစီးထိုးရပ်တိုင်း တစ်နေရာစာရဖို့ ပြေးတက်နေကြလူတွေ ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီး ဘာတွေနှိပ်နေမှန်းမသိ နှိပ်နေတဲ့မြင်ကွင်းမို့ပဲ …. ။
ရှည်လျားလှတဲ့ ကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူးပါ ….
ဖုန်းကြောင့် အလုပ်ထိခိုက်တာနဲ့ သူတစ်ပါးကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်တာကို သိစေချင်လို့ ဒီပို့စ်ကို ရေးဖြစ်တာပါ …
တခြား မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ထိခိုက်စေလိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိပါကြောင်း ….
အင်းနောက်တော့လဲ ဖုန်းဘေခ အီသွားတာနဲ့ပဲ ဖုန်းပြောတာနဲသွားမှာပါ။ အခုတော့ ရခါစမို့ တက်ကြွနေကြတော့ နားလည်ပေးရတော့မှာပေါ့။
အဲဒါဆို မမဝေက အပျိုဂျီးပေါ့……… ဟီး ဟီး
သား ဆရာမ လဲ ၊ သားဖုန်းဆက်ရင် အမြဲတမ်း ဖုန်းကို ချချပစ်တယ် ။
သားဆရာမ ဆိုလို့ ၊ သူ က သားတို့ အိမ်နားမှာ ကျူရှင်လာသင်တယ်လေ ။
သားမှာတော့ ဆရာမ နဲ့ စကားပြောချင်လွန်းလို့ ရှိစုမဲ့စု ပိုက်ပိုက်လေးနဲ့ ဖုန်းဝယ်လိုက်ပါတယ် ။ သူက မကိုင်ဘူးကွာ လုပ်နေလို့ ဗျ……. ဟင့်
ကျွန်မလဲကြုံဖူးပါတယ်။ သားဆရာမကရောက်တာနဲ့ဖုန်းပြောတော့တာပဲ။ ကျွန်မကတော့ သူ့ကိုအားနာစွာနဲ့ ပဲ နားလိုက်ပါတယ်။
အပြင်မှာ အဲလို သမီးလေး ရှိရင်လဲ ဝေဝေ လိုဘဲ ချစ်ဖို့ကောင်းမှာ သေချာတယ်။
ဖုန်းပြောတာကတော့ ကားမောင်းရင်းလဲ ပြော (အမှန်က ဥပဒေ နဲ့မလွတ်)၊ လမ်းလျှောက်ရင်းလဲပြော၊ စားရင်းလဲပြော၊ သွား(အိမ်သာ) ရင်းလဲပြော၊ ပါဘဲ။
လူတွေဘဲ စကားပိုများလာသလား တွေးမိတယ်။
တစ်မျိုးတွေးရင် မျက်နှာချင်းဆိုင် စကားပြောတာထက် မျက်နှာမမြင်ရဘဲ ပြောနေရတာ ကို ပိုပြီး သဘောကျ ကျတယ် ထင်ရဲ့။
ဒါပေမဲ့ အလုပ်ချိန်မှာ ဆိုတာကို တော့ လေးစားရမယ် လေ။
ဆင်ခြင် စရာတွေ က တော့ အများကြီးပါဘဲ။
တူ တူမလေးတွေကို ချစ်ရတာ အရမ်းကောင်းပါတယ် အရီးလတ်ရေ … ချစ်ချင်တဲ့အခါချစ်လိုက်ပြီး မချစ်ချင်တဲ့အခါ လှည့်မကြည့်လို့ရတယ်လေ …
စကားပြောတာကတော့ မျက်နှာမမြင်ရပဲ ပြောရတာ ပိုကောင်းတာတော့ သေချာတယ် … ကျွန်မတရုတ်ပြည်မှာနေတုန်းက စကားပြောစရာလူသိပ်မရှိဘူး … ဗမာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ပဲ အမြဲတမ်း ဖုန်းပြောဖြစ်တယ် … (တစ်မိနစ်ကို ဗမာငွေ ၁၅ ကျပ်ပဲ ကျလို့) … ခဏခဏပြောဖြစ်တာများလာတော့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောဖို့ကြိုးစားကြည့်ကြတယ် .. ဒါပေမယ့် တကယ်လဲ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရော ပြောစရာစကား သိပ်မရှိတော့ပဲ စားဖို့သောက်ဖို့ကို ပိုပြီး အာရုံစိုက်ဖြစ်ကြတယ် …
လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာ ဖုန်းပြောခက တစ်မိနစ်ကို ၅၀ ကျပ်ဆိုတော့ တော်တော်ဈေးကြီးနေသေးတယ် … ဒါတောင် ဒီလောက်ပြောနိုင်ကြရင် ဈေးများလျော့ပေးလိုက်ရင်တော့ မတွေးရဲစရာပဲ …
အဲဒီ ဖုန်းရှိတာ ကောင်းလည်း ကောင်းသလို ..
မကောင်းလည်း မကောင်းဘူးဗျ ..
အလုပ်ချိန်အတွင်းမှာဆို ဖုန်းက ပိတ်ထားတာ အကောင်းဆုံးပဲ …
ကျနော်ကတော့ ဒါတွေသိလို့ ဖုန်းကို မကိုင်တာ …
( အမှန်က ဝယ်ကို မကိုင်နိုင်တာ … :D )
ခုလို အလုပ်ချိန်မှာ ဖုန်းပြောရတော့. စိတ်မချမ်းသာစရာပေမယ့်
နောက်တော့ အသားကျသွားမှာပါ။ကျနော်တို့ ဖုန်းဝယ်စ ကလဲ
ခုလိုဘဲ ဗျာ မျောက်လက်မီးစအပ်သလိုပေါ့
မနေ.ကတော. ဖုန်းပြောရင်းဖီလင်တတ်နေတဲ.ကောင်မလေး ကားတိုက်မလိုဖြစ်သွားသေးတယ် …။
တကယ်တော. ရန်ကုန်မှာ ကားတွေဒီလောက်ရှုပ်တာ လမ်းကူးရင်း ဖုန်းမပြောသင်.ဘူးလေ ……………။
အမှန်တော့ ဖုန်းက ရှိထဲ့ ရှိထဲ့ အော်နေတယ်။
ခုခေတ်မှာ ငှားစားလို့လည်းမရတော့ ထွက်ပေါက်တွေချည်းပဲ။
prepaid လုပ်ရင် ၄လ တစ်ခါ ၁၀၀၀၀ top up လုပ်ရမယ်တဲ့။
အရင်လို ဖုန်းရောင်းစား မြတ်တဲ့ခေတ် မဟုတ်တော့ဘူးနော်။
ပညာတတ် ချမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေတောင် seminar တွေ အလှူပွဲ တရားပွဲ ဟောပြောပွဲတွေမှာ silent mode ထားပေးရမှာ မသိကြသေးဘူး။
နောက်ပြီး ဖုန်းမှားနှိပ်မိရင် ချေချေငံငံတောင်းပန်ဖို့ မသိကြသေးဘူး။
အားလုံးဖတ်ပြီးသား နေမှာပါ။ ဒီလို စိတ်မကြည်ချိန် ပြုံးနိုင်ကြဖို့ ပြန်တင်ပေးပါတယ်။
Facebook ထဲကမို့ ဘယ်သူ့ကို ခရက်ဒစ် ရမယ် မသိလို့ မူရင်းပိုင်ရှင် ခွင့်လွှတ်ပါ။
——— ——– ——– —— ———
ဂွတီး ဂွကျမေးခွန်းတွေ လာမေးနေတာ ဘာလဲ….
“နောက်မှပဲ ပြန်ဆက်တော့မယ်. ဟိုဖက်အခန်းထဲက သောက်ပေါတစ်ကောင်က ရူးသလို
နှမ်းသလိုနဲ့ ငါမေးသမျှ ပြန်လိုက်ဖြေနေလို့….”
မဝေဆီပုံလေးတစ်ပုံပို့ပေးလိုက်မယ် အခုပိုစ်ထဲမှာ အဲဒိပုံလေးထည့်ပေးနော။်
အန်တီဝေဂ သမီးရှိဂျောင်း ကြွားဒယ်ပေါ့လေ… ကြောင်ကြီးမှာလည်း သမီးရှိဘာဒယ်ဗျ…။ ပုရှ် နဲ့ မိုးဂျက် နှစ်ယောက်တောင်ရှိဒယ်။ သမီးလေးဒို့ယေ ဦးကြောင်ကြီး ပေါဇဂါး နားထောင်ဂျရမယ်နော်… လာ အနားဂိုတိုး…ပုံပေါပမယ်…။
ကိုပေါက်ပို့ပေးတဲ့ပုံနဲ့ အန်တီပဒုမ္မာပုံလေးလိုက်တဲ့ဓါတ်ပုံ ထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ် …
ကွန်မန့်ပေးကြတဲ့ရွာသူားများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …
အပေါ်က ဥရောင်းနေတဲ့ ဖုန်းနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ကျုပ်ပဲဗျ
ကိုမတ်ပါတယ် လေးပေါက်ပါတယ် ကိုဖတ်ကတ်ပါတယ် ကိုဂျာပုပါတယ် ကိုသူရပါတယ် ကိုကြီးမိုက်ပါတယ်
Huawei က ကိုရွှေတိုက်
Sony က ကိုသူရ
I phone က ကိုဖတ်ကတ်
Nokia က ကိုမတ် ကျန်တာတော့မသိတော့ဘူး
ကိုဂီရောပါမယ်ထင်တယ် ၇ ယောက်တောင်
အဲတော့ မီးကင်အချဉ်နဲ့တို့ ပြီးအရက်နဲ့မျှောချမှာ။
အဲဒါက 5-5-2012နေ့တုန်းက ရူးနှမ်းမှာရိုက်ထားတာလေ.
အလကားတော့ ပြောပြဘူး ပွဲခရမှာ
အော် အိမ်လိုက်သင်တဲ့ ဆရာမလေးဖုန်းတော်ကီကောင်းတော့ အဟင့် အိမ်လိုက်သင်တဲ့ဆရာတွေပါ နာမယ်ပျက်တော့မယ်…
ကျုပ်တို.တော့ စာသင်နေရင် ဖုန်း ဆိုင်းလင့် လုပ်ထားပြီးမှ သင်တာပါနော်…. စာသင်နေချိန်ဖုန်းမပြောပါဘူးခင်ဗျာ…………..
ဓာတ်ပုံက ဖုန်းကျော်မဟုတ်ဘူး ဖုန်းကင်ဗျ… အဲဒါယူနန်အသားကင်ဆိုင်မှာ အထူစပယ်ရှယ် လေးပေါက်လာတုန်းက ရန်ကုန်က ရွာသားတွေ ၀ယ်ကျွေးထားတာ… ဟိဟိဟိ ဖုန်းကင် နော် ဖုန်းကင်…… ဖရဲသီးကို အဲဒီအချိန်တုန်းက သိပ်သတိရတယ်.. သူဆို သိပ်ကြိုက်ရှာမှာ…. ဖုန်းကင်လေ………… ဟိဟိဟိ